Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » I-Thailand i-Ban yeentsuku ezili-14 zokuHanjiswa kweeNdawo zaseKhaya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Isikhululo senqwelomoya saseHat Yai kwiphondo laseSongkhla eThailand asinanto kwaye sizolile. Owona mqondiso wobomi bomntu ngoonogada abasemsebenzini.
I-Thailand isungule ukuthintelwa kweenqwelomoya kwiintsuku ezili-14 kumaphondo abomvu-mnyama kunye nemimandla.
Ukuvalwa kuya kuqala ngoJulayi 23 ukuya ku-Agasti 2, 2021, ubuncinci.
Uninzi lwamatyala amatsha lubandakanya ukwahluka kwe-COVID-19 Delta, ngogonyo olungakukhawulezisi ngokwaneleyo ukudala imikhosi yokuzikhusela.
Ukulawula i-COVID-19 coronavirus, isibhengezo sendiza sabhengezwa kwaye ulawulo olungqongqo lusebenza ngokukhawuleza. Iindawo zokujonga kunye novavanyo lusendaweni yokuhamba phakathi kwamaphondo obomvu obomvu kunye nezinye iindawo.
Amatyala amatsha e-COVID-19 zirekhodwe yonke imihla kwiphondo elisemazantsi eSongkhla kunye neqela elitsha kwimarike enkulu yaseSapsin kwisithili saseMuang. I-ofisi kamasipala waseNakhon Songkhla ivale imarike kangangeentsuku ezisi-7 ukusukela namhlanje, nge-22 kaJulayi ukuya kwi-28.
IGunya lezoKhenketho Thayilendi (TAT) ibonelele ngohlaziyo kumjikelo omtsha we-COVID-19 wezithintelo obhengezwe kwiiNgingqi ezi-13 eziPhezulu kunye nezingqongqo ezilawulwayo okanye amaphondo abomvu.
Amatyala amatsha ikakhulu abandakanya ukwahluka kweDelta, ngakumbi kumaqela asemngciphekweni (aneminyaka engama-60 nangaphezulu kwabo banezifo), uninzi losulelo luvela ekhaya lusapho. Ngaphandle kwemizamo yokukhawulezisa ugonyo, kusafuneka ixesha lokwakha ukhuseleko lomhlambi.
Iziko loLawulo lweMeko ye-COVID-19 (CCSA) longeze i-Ayutthaya, iChachoengsao kunye neChon Buri kwindawo ebomvu-emnyama ezisa inani lamaphondo ali-13 ukongeza eBangkok, nakumaphondo ama-5 ajikelezileyo-iNakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani , Samut Prakan, kunye ne Samut Sakhon- kunye namaphondo ama-4 akumazantsi e-Thai-Narathiwat, Pattani, Songkhla nase Yala.
Izithuthi zikawonke-wonke zivunyelwe ukuba zisebenze kuma-50 eepesenti kuphela ezikhundla zokuhlala kwaye kufuneka zisebenzise amanyathelo okwehla kwezentlalo. Abasemagunyeni abanxulumene nokuqinisekisa ukuba kukho iinkonzo zothutho ezaneleyo, ngakumbi abantu abanezithuba zokugonya.
Iihotele zinokuvula ngeyure eqhelekileyo, kodwa azivumelekanga ukubamba iintlanganiso, iisemina, okanye iintlanganiso. Iivenkile ezilula kunye neemarike ezintsha zivunyelwe ukuba zivule kude kube ziiyure ezingama-2000. Zonke iivenkile eziluncedo zeeyure ezingama-24 kufuneka zivale ebusuku phakathi kweeyure ezingama-2000-0400.
Uyalelwe ukuba uvalwe ukusukela nge-23 kaJulayi ukuya nge-2 ka-Agasti-okanye kude kufike esinye isaziso-ngamabala emidlalo, iipaka zoluntu kunye neegadi zezityalo, zonke iintlobo zeendawo zokhuphiswano, amaziko emiboniso, amaziko eentlanganiso, iindawo zomsebenzi woluntu, amaziko okufunda kunye neegalari zobugcisa, amathala eencwadi, iimyuziyam , iipaki zembali kunye neendawo zezinto zakudala, amaziko okugcina abantwana, iindawo zokuzilungisa, abalungisa iinwele, iinzipho kunye neevenkile ze tattoo, kunye namachibi okudada.
Iindawo zokutyela kunye neendawo zokutyela zivumelekile ukuba zibonelele ngeenkonzo zokuthatha kuphela ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-2000. Iivenkile zesebe, iivenkile ezinkulu, kunye neevenkile ezinkulu zoluntu zivunyelwe ukuba zivule kude kube ziiyure ezingama-2000 kwaye kuphela kwiivenkile ezinkulu, ezikhemesti nakwezonyango, nakumaziko okugonya.
Ixesha lokufika ebusuku alitshintshi phakathi kweeyure ezingama-2100-0400. Nangona kunjalo, ngexesha leeyure ezisi-7 ebusuku, abantu bayacelwa ukuba bahlale ekhaya baphume kuphela xa kufanelekile.
Zivunyelwe ukuhlala zivulekile phantsi kwamanyathelo angqongqo olawulo lwezifo zizibhedlele, amaziko onyango, iiklinikhi zonyango, iikhemesti, iivenkile, iifektri, iinkonzo zebhanki kunye nezezezimali, ii-ATM, iinkonzo zonxibelelwano ngomnxeba, iinkonzo zokuposa kunye neepasela, iivenkile zokutya kwezilwanyana zasekhaya, izinto zokwakha kunye neevenkile zokwakha, iivenkile ezithengisa izinto ezahlukeneyo eziyimfuneko, iivenkile zokupheka, izikhululo zepetroli kunye neenkonzo zokuhanjiswa kweintanethi.